Home Wararka Taliyahii Ciidanka Saldhiga Booliiska Baledweyne oo lagu dhex dilay gudaha Saldhiga Baledweyne
Taliyahii Ciidanka Saldhiga Booliiska Baledweyne oo lagu dhex dilay gudaha Saldhiga Baledweyne
Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goordhaw uu ku dhintay iska hor imaad kooban oo ka dhacay gudaha Saldhiga Booliiska Baledweyne Taliyahii ciidanka Booliiska magaalada Baledweyne Laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdage.
Iska hor imaadka kooban ee ka dhacay gudaha Saldhiga Baledweyne ee uu ku geeriyooday Taliye Duurdage ayaa ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada Booliiska ee halkaasi horay ugu sugnaa iyo ciidamada Haramcad ee dhawaan la geeyay Baledweyne.
Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa iska hor imaadka kooban ee dhexmaray labada ciidan, waxaana wali Saldhiga iyo nawaaxigiisa laga dareemaya xaalad kacsanaan ah.
Iska hor imaadkaan sababay inuu dhinto taliyahii Saldhiga Booliiska Baledweyne ayaa imaaneya xili saakay Saldhiga Baledweyne lagu xiray boqolaal dadweyne ah oo ay ciidamada Haramcad howgalo ay sameyeen kaga soo qaqabteen xaafada Buundaweyn ee magalaada Baledweyne.
Previous articleFarmaajo oo wada qorshe lagu boobayo 16-ka kursi ee yaalla magaalada Garbahaarey
Next articleAl Shabaab oo sheegtay in ay weeraro toos ah ku bilowday Muqdisho
Boqor Buurmadow “warka ka soo yeeray Rooble waa ku digasho iyo...